हलिउड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिपसँग डेट जान मन छ : अर्पण थापा- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ७, २०७६ रामजी ज्ञवाली
काठमाडौँ — अभिनयमा अब्बल मानिएका अर्पण थापाको परिचय त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । उनी लेखन र निर्देशनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । उनी निर्देशित चौथो फिल्म ‘घर’ गत शुक्रबारदेखि प्रदर्शन भैरहेको छ । अर्पण नेपाली चलचित्र उद्योगका आफ्नै बलबुतामा स्थापित भएका हुन् । रजतपटको यात्रामा उनले अनेकौं आरोह–अवरोह झेले पनि कहिल्यै रोकिएनन् । तीन दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका अर्पणसँग यसपटक रामजी ज्ञवालीले ‘महिलावार्ता’ गरेका छन् ।
अहिलेसम्म कस्ता–कस्ता महिलाहरुको संगत गर्नुभयो?
जीवनकालमा धेरै प्रकारका महिलाहरु भेटिए। घरमा हजुरआमा, आमा, दिदी, बहिनीका व्यवहार, आफ्ना आफन्तमा रहनु हुने महिलाहरुको व्यवहार, स्कुल–कलेजमा भेटिएका युवती साथीहरुका व्यवहार। सबैको व्यवहार फरक थिए।
अनि कलाकार भएपछि भेटिएका महिला पात्रहरुको व्यवहार अन्यभन्दा निकै फरक पाएँ। मैले के बुझें भने, हरेक महिलाहरुको व्यवहार एकै किसिमका नहुँदो रहेछ।
जीवनमा पहिलोपटक महिलाको रुपमा चिनेको व्यक्ति?
मेरो आमा नै हो।
जीवनमा विशेष प्रभाव पार्ने महिला?
मेरो बज्यै हो। म बच्चैदेखि दार्जिलिङमा पढें, त्यहि हुर्किएँ। उहाँसँगै बस्थें। त्यो क्रममा मैले बज्यैलाई नजिकबाट चिनेको छु। कडा मिहेनत गर्ने, मनमा लागेको कुरा फ्याट्टै बोल्ने, नढाँट्ने, छलकपट नगर्ने जस्ता स्वभाव असाध्यै मन परेको हो। उहाँबाट म सधैं प्रभावित छु।
सबैभन्दा सहयोगी महिला?
श्रीमती (निशा) नै हो। अहिले मलाई धेरै नेपालीले चिन्छन्, तर कुनै बेला मलाई नचिन्ने बेला, संघर्ष गरिरहेको बेलामा उनले निकै सहयोग गरेकी हुन्। पहिलेदेखि उनी टिचर हो, उनको कमाई हुन्थ्यो। तर, मेरो सुरुवाती अवस्थामा कमाइ भन्ने कुरा खासै हुँदैन थियो। त्यस्तो अवस्थामा उनले निकै सहयोगी साथिको भुमिका पनि निभाइन्।
सबैभन्दा धेरै माया कुन महिलाको लाग्छ?
बज्यै, आमा र मेरो श्रीमतीको।
घृणा लाग्ने महिला?
ठ्याक्कै त्यो महिलाको नाम भन्न चाहान्न। तर, कतिपय महिलाहरु हुनुहन्छ जसले आफूलाई सबैभन्दा उपल्लो दर्जामा राख्ने, मपाईं र देखावटी गर्नुहुन्छ। त्यस्ता महिला मलाई पटक्कै मन पर्दैन। अनावश्यक प्रशंसा खोज्ने महिलाहरुदेखि म सधैं टाढा रहने गर्छु।
सबैभन्दा इरिटेड (झर्को) लाग्ने महिला?
विषयभन्दा बाहिर गएर बोल्ने, अनावश्यक चासो राख्ने महिला देखेपछि असाध्यै झर्को लाग्छ।
सपनामा आएर सताउने महिला?
मेरो आमा (अनिता) हो।
कल्पनामा आईरहने महिला?
मेरो एकदमै ठुलो हलिउड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिप हो। मलाई एकदमै खतरा लाग्छ। सायद सबैभन्दा धेरै मन पराएकी युवती नै कल्पनामा आउँछिन् होला? त्यो तपाईंले बुझ्नुस्।
पहिलोपटक डेट गएको महिला?
नाम नभनौं है। तर, धेरै वर्षअघिको कुरा हो, एकजना थिइन्।
प्रेममा धोका दिने युवती?
उनी नै हो।
कुनै युवतीले कहिल्यै बिहेको प्रस्ताव गरिन्?
नढाटेरै भन्ने हो भने मलाई कुनैपनि युवतीले बिहेका लागी प्रस्ताव गरेको थाहा छैन। मैले भने धेरैलाई प्रस्ताव गरेको छु।
हलिउड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रिप।
संसारकी सुन्दर महिला?
चलचित्रहरुमा सर्वाधिक सुन्दर अभिनेत्री?
जतिबेला पनि गफ भैरहने महिला?
चलचित्रको काम भएका बेला आफ्नो चलचित्रको अभिनेत्री होला नत्र श्रीमती नै हो कि।
सबैभन्दा मनपर्ने महिला नेतृ?
ड्रेस सेन्स भएकी महिला?
पहिले पहिले त कमै मात्रामा भेटिन्थे। तर, अहिले त जो युवती पनि निकै सुन्दर भएर हिँड्छन्। अधिकांश युवती सुन्दर लाग्छ।
सबैभन्दा धेरै झगडा कुन महिलासँग भयो?
हजुरआमा नै हो। यति धेरै झगडा हुन्थ्यो कि कुरै नगरौं।
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ १२:४६